Andao isika hivezivezy mihoatra ny fanandramana tsotra. Hevitra telo no ilaina amin'ny fanandramana manan-karena: ny fahamendrehana, ny heterogeneity ny vokatra momba ny fitsaboana, ary ny rafitra.
Ny mpikaroka vaovao amin'ny fanandramana matetika dia mifantoka amin'ny fanontaniana iray voafaritra mazava sy voafetra: Moa ve io fitsaboana io "miasa"? Ohatra, misy antso avy amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo iray ve mandrisika olona hifidy? Mampitombo ny taham-pidinan'ny klioba ve ny fanovana ny bokotra vohikala avy amin'ny manga sy maitso? Indrisy anefa, ny fitenenana tsy dia mazava loatra mikasika ny "asa" dia manamaivana ny zava-misy izay tsy voatery milaza aminao raha misy "fitsaboana" amin'ny ankapobeny. Mifanaraka amin'ny fanandramana mifantoka amin'ny fifampitokisana kosa dia mamaly fanontaniana maromaro kokoa: Inona no vokatr'io fitsaboana manokana io amin'ny fampiharana manokana ho an'ity mpandray anjara ity amin'izao fotoana izao? Hiantso fanandramana aho izay mifantoka amin'ity fanontaniana tsotra ity tsotra fanandramana .
Ny fanandramana tsotra dia afaka manome fampahalalana sarobidy, saingy tsy mamaly fanontaniana maro izay manan-danja sy mahaliana izy ireo, toy ny hoe misy olona sasany izay manana fiantraikany lehibe kokoa na kely kokoa ny fitsaboana; na misy fitsaboana iray hafa mety hahomby kokoa; ary raha mifandraika amin'ny teoria sosialy kokoa io fanandramana io.
Mba hampisehoana ny lanjan'ny fifindrana mihoatra ny fanandramana tsotra, andeha hijerena ny fanandramana eo amin'ny sehatra analoga nataon'i P. Wesley Schultz sy ny mpiara-miasa amin'ny fifandraisana eo amin'ny sosialy sy ny angovo angovo (Schultz et al. 2007) . Schultz sy mpiara-miasa dia nanantona varavarana fidirana an-trano 300 tany San Marcos, Californie, ary ireo hafatra ireo dia nandefa hafatra samihafa natao hampiroboroboana ny fiarovana ny angovo. Avy eo, Schultz sy mpiara-miasa dia nandà ny vokatry ny hafatra momba ny herinaratra, na herinandro na tapa-bolana; jereo ny tarehimarika 4.3 ho an'ny famaritana amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny endrika fanandramana.
Sary 4.3: Fomba fanao amin'ny fanandramana fanandramana avy amin'ny Schultz et al. (2007) . Ny fanandramana eny an-tsaha dia nahitana olona 300 teo ho eo tany San Marcos, California, avo dimy heny noho ny fe-potoana valo herinandro. Isaky ny fitsidihana, dia naka lesona tamin'ny mpiasan'ny trano ny mpikaroka. Nandritra ny roa tamin'ireo fitsidihana, dia nametraka varavarankely tao amin'ny trano tsirairay izy ireo ary nanome fampahalalana momba ny fampiasana herinaratra ny tokantrano. Ny fanontaniana momba ny fikarohana dia ny fiantraikan'ny votoatin'ireo hafatra ireo amin'ny fampiasana angovo.
Nanana fepetra roa ny fanandramana. Tamin'ny voalohany dia nahazo toro-hevitra momba ny angovo ankapobeny ny tokantrano (ohatra, ampiasa ny mpankafy fa tsy ny mpanadio rivotra) sy ny fampahalalana momba ny fampiasana angovo azy raha oharina amin'ny fampiasana herinaratra eo amin'ny manodidina azy. Schultz sy mpiara-miasa izany hoe ny famaritana toe-normative satria ny fanazavana momba ny fampiasana angovo eo amin'ny manodidina nanome fanazavana momba ny fitondran-tena mahazatra (izany hoe, ny famaritana fenitra). Rehefa nihevitra ny fampiasana angovo ho vokatr'io vondrona io i Schultz sy ireo mpiara-miasa, dia toa tsy nisy fiantraikany ny fitsaboana, na ny fohy na ny fotoana maharitra; Amin'ny teny hafa, ny fitsaboana dia toa tsy "miasa" (sary 4,4).
Soa ihany, Schultz sy ireo mpiara-miasa dia tsy nijanona tamin'ny fanadihadiana tsotra. Talohan'ny nanombohan'ny fanandramana dia nihevitra izy ireo fa ny mpampiasa mavesa-danja amin'ny herinaratra - ny olona ambonimbony - dia mety hampihena ny fihenany, ary ireo mpampiasa maherin'ny herinaratra-olona ireo dia mety hampitombo ny fihenany. Rehefa nijery ny angon-drakitra izy ireo dia izany no hitan'izy ireo (sary 4.4). Araka izany, ny zavatra toy ny fitsaboana izay tsy nisy fiantraikany dia tena fitsaboana izay nisy fiantraikany roa. Io fitomboan'ny tsy fitoviana eo amin'ny mpampiasa maivana dia ohatra amin'ny boomerang , izay ahafahana mitsabo ny vokatra mifanohitra amin'ny zavatra natao.
Figure 4.4: Ny vokatry ny Schultz et al. (2007) . Ny tontonana (a) dia mampiseho fa ny fitsaboana amin'ny fomba ofisialy dia manombana ny fiantraikany eo amin'ny fitsaboana amin'ny zero. Na izany aza, ny tontolon'ny b) dia mampiseho fa io vokatra io dia vokatry ny fihoaram-pefy roa. Ho an'ireo mpampiasa mavesatra dia nitombo ny fampiasana ny fampiasana fa ho an'ny mpampiasa maivana, nitombo ny fampiasana. Farany, ny tontonana (c) dia mampiseho fa ny fitsaboana faharoa, izay nampiasàna ny fanoritsoritana sy ny fehezan-dalàna, dia nitovy ny fiantraikany teo amin'ny mpampiasa mavesatra saingy nanamaivana ny fiantraikan'ny boomerang amin'ny mpampiasa maivana. Adapted from Schultz et al. (2007) .
Miaraka amin'ny toe-javatra voalohany, ny Schultz sy ireo mpiara-miasa dia nahazo fepetra faharoa koa. Ny tokantrano ao amin'ny faharoa no nahazo ny fitsaboana mitovy - ny toro-hevitra ara-tsosialy ankapobeny sy ny fampahalalana momba ny fampiasana herinaratra ny tokantranony raha oharina amin'ny salan'isa ho an'ny manodidina azy - miaraka amin'ny fanampiana kely: ho an'ny olona manana fandaniana ambany, ny mpikaroka dia nanampy: ) ary ho an'ireo olona manana fampiasam-bola mihoatra ny salan'isa dia nanampy izy ireo :( Ireo emoticons ireo dia natao hanentanana ny zavatra iantsoan'ny mpikaroka fa ny fehezan-dalàna mifehy ny fikambanana . izay atao matetika (Reno, Cialdini, and Kallgren 1993) .
Amin'ny fampidirana an'ity sary kely mampihomehy kely ity, ny mpikaroka dia nampihena be ny vokatra boomerang (sary 4.4). Noho izany, tamin'ny fanolorana izany fiovana tsotra izany-fanovana iray izay notarihan'ny fikarohana ara-tsosialy ara-tsosialy (Cialdini, Kallgren, and Reno 1991) dia afaka namadika programa iray izay toa tsy niasa ho an'ny iray izay niasa, ary koa, afaka nanampy tamin'ny fahatakarana ankapobeny ny fiantraikan'ny soatoavina ara-tsosialy ny fitondrantenan'ny zanak'olombelona.
Amin'izao fotoana izao anefa, dia mety hitanao fa misy zavatra hafa kely amin'io fanandramana io. Raha ny tena izy, ny fanandramana ny Schultz sy ireo mpiara-miasa dia tsy manana vondrona mifehy azy tahaka ny ataon'ny fanandramana mifehy ny fakantsary. Ny fampitahana an'ity endri-javatra ity sy ny an'ny Restivo sy van de Rijt dia mampiseho ny fahasamihafana misy eo amin'ny tetikasa fanandramana roa. Ny tetikasa eo anelanelan'ny tetikasa , toy ny an'i Restivo sy van de Rijt, dia misy vondrona fitsaboana sy vondrona mpitantana. Ao anatin'ny tetikasa anatiny , ny lafiny iray, ny fihetsika ataon'ny mpandray anjara dia ampitahaina mialoha sy aorian'ny fitsaboana (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) . Ao anatin'ny fanandramana ao an-tokantrano dia toy ny hoe ny mpandray anjara tsirairay dia miasa toy ny vondrona mpiandraikitra azy manokana. Ny tanjon'ny drafitrasa eo anelanelan'ny tetikasa dia ny fiarovana ny mpitsoa-ponenana (araka ny voalaza tetsy aloha), fa ny tanjaky ny fanandramana eo amin'ny sehatra anatiny kosa dia ny fitomboan'ny mari-pahaizana. Farany, mba hanohanako hevitra iray izay ho avy aty aoriana rehefa manolotra torohevitra momba ny famolavolana traikefa dizitaly aho, ny _mixed design_combines ny fahamendrehana ao anaty endrika-endrika sy ny fiarovana amin'ny fikorontanana eo anelanelan'ny lohahevitra (sary 4.5).
Sary 4.5: Tetika telo fanandramana. Ireo fanandramana mifehy ny fakantsary ampiasaina dia ampiasaina eo amin'ny loha- hevitra. Ohatra iray momba ny fanadihadiana iray momba ny lohahevitra iray dia ny fanandraman'i Restivo sy van de Rijt (2012) momba ny barnstars sy ny fandraisana anjara amin'ny Wikipedia: ireo mpikaroka dia nampizarazara ireo mpandray anjara tamin'ny tarika fitsaboana sy fifehezana, nanome mpandray anjara tamin'ny tarika fitsaboana barnstar ary nampitaha ny vokatra vondrona roa. Ny karazany faharoa dia endrika enti -hevitra . Ireo fanandramana roa natao tao amin'ny Schultz sy ny fianarana (2007) momba ny fitsipi-pifehezana ara-tsosialy sy ny fampiasana angovo dia maneho ny endrika anatiny: ny mpikaroka dia nampitaha ny fampiasana herinaratra ny mpandray anjara alohan'ny nahaterahany. Ny drafitra anatiny dia manatsara ny mari-pahaizana ara-statistika, saingy misokatra ho an'ny mpampiasa (ohatra ny fiovan'ny toetrandro eo amin'ny fitsaboana sy ny fitsaboana) (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) . Ireo drafitr'asa ao anaty lohahevitra dia indraindray antsoina hoe fepetra miverimberina. Farany, ny fampifangaroana amam- borona dia mampifandray ny fahamendrehana eo amin'ny famolavolana drafitra ao anatiny sy ny fiarovana amin'ny fifandonana eo amin'ny tetikasa. Amin'ny endrika miavaka, ny mpikaroka iray dia mampitaha ny fiovana amin'ny vokatra ho an'ny olona ao amin'ny vondrona fitsaboana sy fanaraha-maso. Raha efa misy fampahalalana mialoha ny fitsaboana, toy ny tranga maromaro ao amin'ny fanandramana nomerika, dia matetika ny tetikasa mifangaro no mamolavola tetikasa eo amin'ny taranjam-pandaminana, satria miteraka fitomboana tsara kokoa.
Amin'ny ankapobeny, ny famolavolana sy ny vokatr'ilay fianarana nataon'ny Schultz sy ny mpiara-miasa (2007) mampiseho ny lanjan'ny fifindrana mihoatra ny fanandramana tsotra. Soa ihany fa tsy mila famoronana mamorona ianao mba hamoronana fanandramana tahaka izao. Ny mpahay siansa sosialy dia nanamboatra hevitra telo izay hitarika anao mankany amin'ny fanandramana kokoa: (1) ny fahamendrehana, (2) heterogeneity ny vokatry ny fitsaboana, ary (3) ny rafitra. Izany hoe, raha mitadidy ireo hevitra telo ao an-tsainao ianao rehefa mamolavola ny fanandramanao, dia hanao zavatra mahaliana sy mahasoa kokoa ianao. Mba hampisehoana ireo foto-kevitra telo ireo, dia hamariparitra karazam-panandramana an-tserasera maromaro aho izay mamolavola amin'ny fomba mahazatra sy ny vokatra mahafinaritra ataon'ny Schultz sy ny mpiara-miasa (2007) . Araka ny ho hitanao, amin'ny alalan'ny famolavolan-kevitra, ny fampiharana, ny fandalinana, ary ny fandikana, ianao koa dia afaka mivezivezy mihoatra ny fanandramana tsotra.